Baolina kitra : Manam-pahaizan’ny Fifa manofana ireo mpitsara gasy
Miatrika fiofanana etsy amin’ny Hotel Grand Mallis, Analakely ao anatin’ny dimy andro ireo mpitsara baolina kitra malagasy.
Manam-pahaizana manokan’ny Fifa efa-dahy (Tonizianina : Boubaker Hannachi, Ejyptianina : Amed Elsami, Maraokanina : Yahya Hadqa ary Burundi : Bernard Mubusa) no mitarika izany fifaninanana avo lentan izany.
« Fanamafisana ny ambaindain’ny fitsarana baolina kitra izy ity. Tanjona ny hanomezana azy ireo ny lalàna vaovao ho an’ny lalao, izay tsy mitsahatra ny mihavao hatrany. Tolorana mari-pankasitrahana ireo mpitsara 27 mandray anjara aorian’ny fiofanana », araka ny nambaran’i Boubaker Hannachi, nandritra ny lanonam-panokafana, omaly.
Fotoana iray hoentina mampitovy ny tadin-dokangan’izy ireo amin’ireo mpitsara rehetra maneran-tany izany. « Heveriko fa tsara ny manaraka izany fiofanana izany satria rehefa tonga mpitsara ianao dia azo heverina ho voaozona ihanatra mandra-pijanonana », hoy i Heriniaina Zarasoa Rakotondramanana, mpitsara nasionaly avy any Antalaha izay manana ny ho aviny amin’ny fitsarana baolina kitra.